Gudiga doorashada Somalia oo War ka soo saaray…. | Kismaayo24 News Agency
Gudiga doorashada Somalia oo War ka soo saaray….
Thursday October 6, 2016 - 11:35 under Somali News by admin
Qabashada Lacagaha Is-diiwaan Galinta Musharraxiinta
Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Dadban ee heer Federaal waxaa uu ku faraxsan yahay in uu idiin soo bandhigo akoon bangi ah ee loola dan leeyahay qabashada lacagaha is-diiwaan galinta musharraxiinta u tartamayo kuraasta baarlamanka Soomaaliya ee soo socdo. Fadlan hoos ka eeg macluumaadka akoonka.
Musharraxiinta Aqalka Sare
Dadka doonaya in ay isu sharraxaan kuraasta Aqalka Sare waxaa is-diwaan galintu ugu casumi doonaa qaybta fulinta ee dowlad goboleedyada.
Lacagta is-diiwaan galinta dadka u sharraxan kuraasta Aqalka Sare waxaa isla meel dhigay Madasha Hoggaanka Qaranka. Waxaa la isla meel dhigay in musharraxiinta ragga ah ay bixiyaan 10,000 oo doolar, haweenkana bixiyaan 5,000 oo doolar.
Is-diiwaan galinta ma dhameystirno illaa iyo markii lacagta la wada bixiyo dukumeentiyadana la hubiyo.
Musharraxiinta Golaha Shacabka
Musharraxiinta Golaha Shacabka waxaa lagu casumi doonaa in ay is diiwaan galiyaan xilliga ay ku dhawaaqaan xafiisyada Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Dadban ee heer Gobol.
Musharraxiinta waa in ay buuxiyaan foomamka is-diiwan galinta, waana in ay gudbiyaan dhammaan dukumeentiyada loo baahan yahay iyo rasiidhka lacagta akoonkan lagu shubay. Is-diiwaan galinta ma dhameystirno illaa iyo markii lacagta la wada bixiyo dukumeentiyadana la hubiyo.
Kharashka is-diiwaan galinta ragga u sharraxan Golaha Shacabka waa 5,000 oo doolar, haweenkana waa 2,500 oo doolar.
Haddii ay jiraan wax su’aal ah ku soo dir su’aashaada cinwaanka ah:
GUDDIGA FEDERALKA HIRGELINTA DOORASHOOYINKA DADBAN (GFHDD)
Ciwaanka Xarunta Dhexee ee Bangiga:
Maka Al Mukarama, Degmada Hodan, ee Muqdisho